'Kawaqhutshwa Kahle Amalungiselelo Okhetho Oluzakwenziwa Ngo2018'
FILE: Kuvota owesifazana kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka2013.
Lanxa abamabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela ukuba kube lenguquko yemithetho elawula ezokhetho kusisekelo sombuso ukhetho luka 2018 lungakenziwa, lulakho ukwenziwa ngomnyaka ozayo leyo nguquko ingekenziwa.
Isisekelo sombuso kanye lemithetho elawula ngezokhetho kunikeza umkhokheli welizwe amandla wokutsho usuku lokhetho kungakhathelekile ukuthi sesiguqulwe loba hatshi.
Isigaba 143(1) sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukusebenza kwedale lephalamende, okweminyaka emihlanu kusukela ngosuku lokugcotshwa kukamongameli.
Lokhu kutsho ukuba idale elikhona manje lizokuma ukusebenza phakathi kwamabili, mhla ka 21 Ntulikazi ngomnyaka ozayo njengoba uMongameli Robert Mugabe, wafungiswa ukuthatha leso sikhundla mhla ka 22 kaNtulikazi ngomnyaka ka 2013.
Umthetho uthi kumele kube lamalanga angedluli amatshumi amane lane (44) loba ukwedlula angamatshumi ayisitshiyagalombili lane (84), kusukela lapho kubethwa khona usuku lokhetho langosuku lapho oluzoqhutshwa khona.
Umsekeli wesikhulumeli se MDC-T, uNkosazana Thabitha Khumalo, uthi kawahambi kahle amalungiselelo okhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uthi kukhanya engani ikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission (ZEC) yenza ngabomo ukwenzela ukuthi kunqobe ibandla le Zanu PF kukhetho oluzayo.
UNkosazana Sandra Ndlovu, oyisifundi sekholitshini le Midlands State University njalo engomunye wabontanga bebandla le MDC-T, usekela imbono kaMaKhumalo egcizelela esithi bayakuzwisiswa okutshiwo ngumthetho wezokhetho.
Uthi bazophatheka kukhetho loba ingenziwanga indlela yokubhalisa amagama, abalelungelo lokuvhota kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku eye Bio-metric registration.
UMnu. Stephen Sibanda, omunye wabontanga abaphatheke emikhankasweni, yokususwa embusweni kukaMugabe ephansi kwabeqembu leOccupy Africa Unity Square, uthi ngesimo esikhona kusobala ukuba amabandla ezombusazwe aphikisayo akakalulungeli ukhetho.
Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana labenhlanganiso ye ZEC, ukuzwa umbono wabo phezu kwaloludaba.